Nin ganacsade ah oo lagu toogtay wadada Uhuru Highway – The Voice of Northeastern Kenya
Nin ganacsade ah oo lagu toogtay wadada Uhuru Highway
Nin ganacsade ah ayaa la geeyay isbitaalka MP Shah ee magaaladatan Nairobi kadib marki u dhaawac ka soo gaaray toogasho loo geeystay isku day lagu doonayay in dhac loogu geeysto.
Ganacsadan dhaawaca u ka soo gaaray toogashada loo geeystay ayaa waxa magaciisa lagu sheegay Jitendra Chevda oo 49 sano jir ah kaas oo waqtiga la soo weeraraayay ku socday wadada Uhuru Highway maqribnimada shalay oo talaado ahayd sacada marka ay ku beegneyd 6.30 p.m waxana lagu soo waramaya in u weerarkaas ku qaaday hal nin oo hubeysna.
Ganacsadahan ayaa weerarka loo geeystay kadib marki u diiday in u bixiyo lacag u ka dalbaday ninka weerarka u geeystay waxana u ninkaas burcada ah kadib u ka toogtay qeybta dambe ee jirka sida ay booliska sheegen waxana kadib dhacdadaas ganacsadahaas loola cararay isbitaalka Nairobi West Hospital isago marki dambena la geeyay isbitaalka MP Shah.
4 qof oo ninka ganacsadaha ah la socday xiliga weerarka loo geeysanaayay ayaa booliska ka cawinaaya in ay baritaanka sameeyan.
Dhacda kale oo noocan oo kale ah ayaa waxa ay iyadana ka dhacday xafada isku raranta ee Mukuru Kayaba kadib marki nin ay halkaas weerar ku qaaden niman burcad ah.
Ninka la dilay oo lagu magacaabi jiray Mr Aggrey Ouma ayaa waxa la sheegay in u geeriyooday isago ku sugan isbitaalka Kenyatta National Hospital ee loola cararay kadib dhacdadaas dhacday xalay abaare 9 fidnimo.
Ninka la dilay ayaa waxa xiliga weerarka lagu qaadayay u ku sii wajahnaa gurigiisa isago oo u wehlinaayay nin lagu magacaabo Mark Omondi waxana weerarka ku soo qaaday laba nin oo burcad ah kuwaas oo ku hubeysna baangado.
Burcadaas ayaa labada nin ku ammaartay in ay istaagan balse inta ay istaagi lahaayen waxa ay ka door biden in ay cagahooda wax ka raadiyan.
Omondi ayaa la sheegay in u dhaawacyo fudud la baxsaday halka ninka kalena isna u dhaawac ka soo gaaray fooda kaas oo uu ugu dambeynti u geeriyooday.
← 3 kamid ah ciidamada GSU-da oo geeriyooday halka tira kalena ay dhaawacmen
Dhul gariir ku dhuftay bartamaha Taliyaaniga →